Indlu entle, iLake View, iikhilomitha ezingama-20 ukusuka eSalzburg
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguRoland
Le ndlu isanda kulungiswa ngokutsha (150m2) ibekwe phezu kwenduli inombono omangalisayo phezu kwamachibi amabini kunye nedolophu entle yaseMattsee. Ngemizuzu nje eli-10 unokuhamba uye kumbindi weMattsee kunye nechibi apho unokuqubha khona. Ifumaneka kwisithili edume Austrian ichibi kwaye nje 20 km ukusuka zembali Salzburg indlu ibekwe ngokugqibeleleyo ukuthatha uhambo imini ukuya kwezinye iindawo ezimangalisayo ezifana Hallstadt kunye Altausee etc. Nangona kunjalo mhlawumbi uhlala nje kwaye ukonwabele?
Isanda kulungiswa kweyona migangatho iphezulu kwaye ifakwe ifanitshala egqibeleleyo kunye nesitayile indawo ibangela ukuzola. Umgangatho ovulekileyo womhlaba onesicwangciso esivulekileyo sendawo yokuhlala iimpawu:
-ixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nemo yekhitshi yobugcisa enendawo yokuhlala, i-alcove epholileyo enombono omangalisayo wepanoramic kunye nesitovu esifakwe ithayile;
-Indawo yokuhlala enkulu kodwa epholileyo enendawo yomlilo
Amagumbi okulala amabini atofotofo kunye negumbi lokuhlambela elitofotofo elineeshawari zemvula abekwe kumgangatho wokuqala. Nakwigumbi lokuhlambela unokonwabela umbono omangalisayo wamachibi kunye neMatsee.
Igadi enkulu intle kwaye izolile, ilungele ukuba nesidlo sangokuhlwa kunye neziselo ngelixa usonwabela ukutshona kwelanga phezu kwamachibi. Kanye emva kwendlu kukho ihlathi elinemozulu entle kakhulu ngexesha lehlobo elishushu. Unokuqala ukuhamba kwakho ukusuka kumnyango wendlu.
IMattsee yidolophu entle endala enebhafu kawonke-wonke echibini, iindawo zokutyela ngqo elunxwemeni, iziko lembali njl.njl.
Ungaya kuqubha, ukuhamba, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile - konke oko usuka ngqo endlwini. ISalzburg ikumgama oziikhilomitha ezingama-20, iMunich 150, iVienna iikhilomitha ezingama-300. Uphakathi kwendawo yechibi laseSalzburg kwaye usondele kakhulu kwi-"Salzkammergut" edumileyo kunye neFuschllake, Wolfganglake, Mondlake njl.
ISalzburg, indawo yokuzalwa yaseMozart kwaye idume ngobuhle bayo kunye nomnyhadala kumgama oziikhilomitha ezingama-20.